DAAWO: Muuse Biixi oo hortagaya Baarlamaanka Somaliland, & dalabka Xildhibaanada – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
May 7, 2022 Xuseen 5
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa lagu wadaa in maalinta Isniinta ah uu hortago Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka Somaliland, si uu ugu jeediyo khudbad sanadeedka Madaxweynaha.
Madaxweyne Biixi ayaa khudbadiisa diirada ku saari doona xaalada guud ee Somaliland, gaar ahaan dhinacyada Amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda, xilli ay Somaliland kusii siqeyso doorashada Madaxweynaha.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa kulan maanta uu yeeshay soo jeediyay in su’aalo la weydiiyo Madaxweyne Muuse Biixi.
Maantana ma madax ka nooshii bil-saddexda ahayd, ee xaafaddii koonfurta Hargaysaa meesha “ruwaayad dhigaysa”?!
Waar Lawyacaddo illaa Libooye, jamhuuriyaddii “aboor baa Ku baxay”. Baarlamaan lagu lahaa!!! Waar NGO yaroo lagu qaraabtaa lawada samaystay.
Aniga NGO-gaygii SSC, ee aan madaxweynha Ka ahaa, isbaaraa loo dhigtay. Hargaysa, Garoowe & Muqdishaa isugu Kay tagay. Welise far baa iitaagan.
Deeqo Libin says:
Hillaacow haddii Somaliland Madax ka nool tahay, reer Soolna waa af ka nool. Waxaana gumaysi ku haysta kuwa aad ku sheegtay Madax ka nool. Marka hadal kuuma eka oo kaftanku waa kaa xiran yahay illa aad heeryada gumaysiga aad iska qaadaan.
Bakheyl baa jira haddana qudduuca oo walaalkii baraarihiisa, bilkheyr aan odhan karayn, Bulshada Somaliland anaa 100 jeer Bilkheyr leh ( Fannaan Iskalaaji). Ninka Hillaac waa habar hinastay, waa xaasid, Allah muxuu belaayo la rabaa qaybo badan oo Somali deggan tahay, Allah noo maqli maayo. Waa ninkii tiisa waxba ka qaban waayey ee tu kale ka hadlaya. Dawaco ayaa damacdsay inay rucub canab ah oo geed ku taala soo goosato, wey ku booday oo booday oo gaadhi weyday, markaasay tidhi ” Sour Grape”
Miskiin ya daalas , Wax aan jirin wax saamayn ah kuma yeelanayso Somaliland, Somaliland hore ayay u socotaa in kasta oo xaasidnimo badantahy, xuduudaha Somaliland is known my friend?
Mustafe, meel cidla ah baad iga haaraantay. Anigu waxa aan ku halqabsaday hadalkii Feysal-Waraabe, ee ahaa, “SL Muusaa NGO ka dhigay.” Hadda ogoow, xisbigiisa NGO-ah ma arko! Si kastaba, Soomaalidu been & khiyaali & dhaan-dabagaalay isku maaweeliyaan. Mar labaad baan ku celinyaa, waa wada “madax kanool NGO lagu qaraabta ah”.
Deeqo Libin, Laaska & Sool anukaa joogna.